आरुघाट, धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकाले शिक्षाको दायित्व लिएको प्रत्याभूति | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
आरुघाट, धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकाले शिक्षाको दायित्व लिएको प्रत्याभूति
Published On : १९ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०८:०२
कतिपय गाउँपालिकाले कतिपय कामहरु उदाहरणीय रुपमा गरिरहेका छन् । कुनैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कुनैले शिक्षा क्षेत्रमा, कुनैले विकास निर्माण वा बिभिन्न क्षेत्रका काम उदाहरणीय रुपमा गरेर चर्चा कमाएका छन् ।
यो बर्षदेखि आरुघाट, धार्चे र भीमसेन थापा गाउँपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी एउटा काम उदाहरणीय रुपमा गरेका छन् । गाउँपालिकाभरि कार्यरत सबै नीजि स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ता बेहोरेर आरुघाटले नमूनायोग्य काम गरेको छ । सो कामका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै धार्चे गाउँपालिको पनि नीजि स्रोतको शिक्षक राख्न एक करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसले सबै नीजि स्रोतका शिक्षकलाई तलब नदिए पनि बिभिन्न विद्यालयमा नीजि स्रोतको शिक्षक राख्ने रकम दिएको छ ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरेर परीक्षण गरेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने स्थानीय सरकारले शिक्षाप्रतिको दायित्व बहन गरेको छ । विद्यार्थीसंग वा अभिभावकसंग पैसा उठाएर विद्यालय चलाउनु पर्ने बाध्यता वा बिभिन्न शीर्षकको पैसा बचाएर विद्यालय चलाउनु पर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने सुरुवात गरेका छन् । यो प्रसंसनीय काम हो ।